केपी ओली र वामदेवको ‘डिनर मिटिङ’ ले नेकपा भित्रको माहौल रोचक बन्दै :: a1nepal.com.np
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली उपचार पश्चात स्वदेश फर्किए लगत्तै नेकपाका शिर्षा नेताहरुलाइ भेट्न ब्यस्त छन् । मंगलबार अपरान्ह नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटार प्रधानमन्त्री ओलीको लामै कुराकानी भएको थियो । दुई नेताबीच के के कुराकानी भयो भन्ने नखुलेपनी उनीहरु बीच पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड सम्बन्धमा कुराकानी भएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली यस्तै भेटघाटमा व्यस्त रहे । उनले नेकपाका (खासगरी पूर्व एमाले) नेताहरु धेरैसँग भेटेका थिए । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको ‘डिनर मिटिङ’ भने यतिबेला चर्चाको विषय बनिरहेको छ । नेकपा वृत्तमा बुधबार दिनभरी मंगलबार रातिको ‘डिनर मिटिङ’को चर्चाले बिभिन्न अड्कल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘डिनर मिटिङ’ गरेका थिए वामदेव गौतमसँग ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता बामदेव र केपी बीच निकटता बढ्दै गएको विषयले नेकपा भित्रको माहौल रोचक बन्दै गएको छ । यस्तो बेला केपी र वामदेवले मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घन्टा जति समय बिताएको र खाना पनि सँगै खाएको विषय नेकपा भित्र चर्चाको विषय बनेको सनराइज खवरले प्रकाशन गरेको छ ।
पेचिलो बन्दै गएको सचिवालय बैठक र विभागीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई लिएर केपी बामदेव बीच के कुरा भयो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । वामदेवलाई महत्वपूर्ण मानिएको संगठन विभागको जिम्मेवारी दिने पक्षमा केपी छन् भन्ने बुझिन्छ । तर, अन्य विभागहरुको विषयमा टुंगो नलाग्दा सचिवालय बैठक लम्बिइरहेको छ । बुधबार पनि सचिवालय बैठक स्थगित भयो । अब बिहीबार बस्ने बताइएको छ ।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सबैको मृत्यु भएको पुष्टी । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आकस्मिक बैठक रक्सीले मातेका पाइलटले जहाज उडाउन खोज्दा मेलम्चीको पानी चैत १५ सम्ममा राजधानीमा ल्याइदै
← सूर्य थापाले भने– गुरिल्लासॅग डराउने दिन गइसके !	एन आर एन बेल्जियममा नयाँ नेतृत्वका लागि ‘सर्वसहमति कि निर्वाचन’ ? →